मोडलिङ्ग पोर्टफोलियो के हो ? र यसको प्रयोग कसरी हुन्छ? हेर्नुहोस! ५ सुझाव | ArtistSansar.com
मोडलिङ्ग पोर्टफोलियो के हो ? र यसको प्रयोग कसरी हुन्छ? हेर्नुहोस! ५ सुझाव
एउटा सफल मोडल बन्नको लागि पहिलो कदम भनेको मोडलिङ्ग पोर्टफोलियो बनाउनु पनि हो। जसरि अन्य काम तथा अवसर खोज्न बायोडाटा बनाएको जस्तै मोडलिङ्गमा अवसर प्राप्त गर्नको लागि पोर्टफोलियो एउटा बायोडाटा जस्तै हो । एजेन्सी वा ग्राहकले तपाईंलाई एउटा कामका लागि निर्णय गर्ने आधार नै पोर्टफोलियो हुन्छ। यो केवल फोटोहरूको संग्रह मात्र होइन, तपाईको प्रतिभाको प्रदर्शन गर्न, क्यामरा लुक्स र प्रोफेशनल मोडलको रुपमा आफुलाई उभ्याउन यसको महत्व हुन्छ।
सुझाव १:मोडलिङ्गको प्रकार निर्धारण गर्नुहोस्।
मोडलिङ्गको प्रकार धेरै छन्। सर्बप्रथम मोडलिङ्गमा आउने सपना देख्दै हुनुहुन्छ भने तपाई कस्तो प्रकारको मोडलिङ्गमा आबद्द हुन खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यो निर्धारण गर्नुहोस। एजेन्सी तथा ग्राहकले व्यावसायिक मोडलहरूमा बिभिन्न चीजहरू खोज्दछन्, र यसको परिणाम स्वरूप फोटोहरू तपाईंले आफ्नो पोर्टफोलियोमा समावेश गर्नुभयो भने मोडलिङ्गको प्रकार प्रतिबिम्बित हुन्छ। यो प्रारम्भिक निर्दिष्ट गरेर धेरै समय र लागत बचत गर्न सकिन्छ!
सुझाव २: प्रोफाइल पृष्ठ सिर्जना गर्नुहोस्
मोडलिङ्गमा आबश्यक एक महत्पूर्ण पृष्ठ भनेको डिजिटल पोर्टफोलियो पेज। अनलाईन पोर्टफोलियो अथवा सोसियल मिडिया नै किन नहोस एक बिशेष पृष्ठ बनाउनुहोस जहाँ तपाइँको सबै विवरणहरु उचाई, वजन, मापन, पोशाक आकार, जुत्ता आकार, उमेर, कपाल को रंग, आँखाको रंग र कुनै पनि ध्यान देने योग्य निशान वा ट्याटू जस्तो शरीर पक्षहरू समेत उल्लेख गर्नुहोस। हाई रिजोलुसनको फोटोहरु अपलोड गर्नुहोस। नेपालमा भने artistnepal.com मार्फत मोडलहरुले आफ्नो डिजिटल पोर्टफोलियो पेज निर्माण गर्न सक्छन।
सुझाव ३ : हेडशट समावेश गर्नुहोस्
तपाईले बनाउने पोर्टफोलियोमा हेड्शट पनि समाबेश गर्नुहोस। जुन तपाईंको अनुहार र अनुहार को बनौट स्पष्ट देखिएको होस्। लाईट मेकअपमा सुट गर्नुहोस। यो फोटोहरु एजेन्सीहरू र ग्राहकहरूलाई तपाईंको प्राकृतिक सुन्दरता देखाउन मद्दत गर्दछ।
सुझाव४: भर्सटाईल बन्नुहोस्
तपाईंको पोर्टफोलियोमा समाबेश फोटोहरुले एक मोडेलको रूपमा तपाईंको बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन गर्नुपर्दछ। यसकोलागि विभिन्न प्रकारका पोजहरू र ड्रेसअपहरु र त्यहि अनुरुप मेकअप महत्त्वपूर्ण हुन्छन्!
सुझाव ५: पोर्टफोलियो नियमित अपडेट गर्नुहोस्
यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि नयाँ पोर्टफोलियोको साथ तपाईंको पोर्टफोलियो अपडेट गर्न जारी राख्नुहोस् जुन तपाईं को मोडेलको रूपमा हुनुहुन्छ भनेर राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्दछ। यदि तपाईंले आफ्नो कपालको रङ्ग वा शैली परिवर्तन गर्नुभयो भने, तपाईंको पोर्टफोलियोका फोटोहरूमा समाबेश हुनुपर्दछ यसलाई प्रतिबिम्बित गर्न। सम्भव भएसम्म वर्षमा १ पटक पोर्टफोलियो अपडेट गर्नुहोस या भनौ, कुनै फोटोहरू एक बर्ष भन्दा पुरानो हुनु हुँदैन।
तपाईंको पोर्टफोलियो बनाउँदा, यो कहिल्यै नबिर्सनुहोस् कि यसले तपाईंले देखेको मोडलिङ्ग सपनामा व्यावसायिक स्थानमा प्रतिनिधित्व गर्दैछ ! तपाईको प्रोफेसनल फोटोहरूको पोर्टफोलियोले अवसरलाई गम्भीरताका साथ लिने सम्भावनालाई बढाउँदछ। अन्तमा, तपाईंको मोडलिङ्ग सपनाहरू प्राप्त गर्न पहिलो कदम सफल भयो भनेर सम्झनुहोस !